မာရ်နတ်ရဲ့ မယားပါသမီး – Grab Love Story
ကျမဟာ အတန်းပညာလေးတက်လာသလို ယောကျာင်္းတွေကိုကိုင်တွယ်ရာမှာလဲကျွမ်းကျင်လာပါတယ်၊သူတို.အကြောင်းနားမလည်ခင်ကတော့အရိုးခံနဲ.ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်…အခုတော့…သူတို.ဟာ ဘယ်လောက်ကလိမ်ကျတယ် ဆိုးသွမ်းယုတ်မာတယ်ဆိုတာ တဖြေးဖြေးသိလာရတော့ ကျမရဲ.မွေးရာပါဉာဏ်နီဉာဏ်နက်တွေသုံးလာရတာပေါ့။
သူတို.ကိုချိုတပ်ပြီး နာဖားကြိုးထိုးပေးတယ် ..ဒါတောင်အပြုံးမပျက်ကြပါဘူး ..ကျမနောက်တကောက်ကောက်ပဲ သူတို.ရဲ.သိက္ခာတောင် အားမနာတော့ပါဘူးရှင်။
ကျမကိုပထမဆုံးပန်းဦးလွှတ်တဲ့ ကျူရှင်ဆရာဟာ ကျမ ၉ တန်းအောင်ကြောင်းသိရတာနဲ. သူနဲ.တညအိပ်ဖို.တောင်းဆိုပါတယ် သူကတော့ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ.လှည့်ပတ်တောင်းတာပေါ့ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့အစရှိခဲ့တဲ့ကျမကို စာမေးပွဲအကြောင်းပြပြီး လိုးတာပါပဲ ကျမ မကြိုးစားရင်အောင်မလားစာမေးပွဲက ဒါကိုသူကအရှက်မရှိ အခွင့်ရေးယူခဲ့တယ်..ဒါပေမယ့် ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျမရဲ.ချစ်သူ မြင့်မောင် ဆိုင်ရင်လဲ တစ်ကြိမ်မှာပျော်ပွဲစားအကြောင်းပြပြီး ကျမကိုအရက်မူးအောင်တိုက်ပြီးတော့သူ.သူငယ်ချင်းတွေဝိုင်းလိုးတာ ကြည့်နေတယ် ကျမ ကနောက်တွေ.တော့မေးကြည့်ပါတယ် ဒီခတ်မှာဒါတွေကမဆန်းပါဘူးတဲ့ မိန်းမဆိုတာအပေါက်ပါတော့ အချောင်းထဲ့ရမှာနိယာမပဲတဲ့ နောက်ကွယ်မှာသောင်းကျန်းလဲ သိရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ဒီတော့သူ.ရှေ.မှာတင် ခင်တဲ့သူတွေကိုလက်ဆောင်ပေးရတာပါတဲ့ ပိတ်ဆိုစရာမရှိပါဘူးတဲ့။
ကျမတွေ.တဲ့ယောကျာင်္တွေထဲမှာဖြင့် ပြတ်တဲ့လူမရှိပါဘူး ဒါနဲ.ကျမသူတို.ကို အပေးအယူသဘော နဲ.ဆက်ဆံဖို.ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ဒါနဲ.ကျမမာယာသုံးလိုက်တော့ ဟောကျူရှင်ဆရာတွက်လခဟာ အဝတ်အစားနဲ.အလှအပ ပစ္စည်းဖိုးဖြစ်သွားတယ် ကျူရှင်လခလဲမပေးရတော့ဘူးလေ။
မြင့်မောင်ခင်ဗျာလဲ ကျမရဲ.ချုပ်ကိုင်မှုကြောင့် လဘက်ရည်ဆိုင်မထိုင် မုန်.မစားဘဲ လက်ဆောင်တွေဝယ်ပေးနေရတာပေါ့ ဒီလိုနဲ.ပေါ့…………………………………………….။။။။။။။
“မြင်ပါတယ်ဗျာ မြင်ပါတယ် ဒါပေမယ့်လှလွန်းလို.ပါ”
“ရှင်နော် လူကိုဘာမှတ်နေလဲ အသက်မှအားမနာ သင်းချိုင်းကုန်းခြေတစ်ဖက်လှမ်းကြီး”
“အိုး ယဉ်ကျေးလိုက်တာကွယ် တောင်းပန်တဲ့အနေနဲ.အအေးတိုက်ပါရစေ လက်ခံပါနော်”
“အိုး ရှင့်မသိဘဲ နဲ.ကျမကဘာလို.လိုက်ရမှာလဲ”
“ဟာ မင်းလေးကလဲ မင်းလေးတို.လမ်းထဲကဘဲလေ သိရဲ.သားနဲ.လာပါကွာမိတ်ဖြစ်ဆွေဖြင့်ပေါ့ ပြုစုပါရစေ”
ကျမသိပ်မငြင်းချင်ဘူးလေ အခုတလောပိုက်ဆံလိုနေတယ် ချစ်သူသစ်လဲရှာနေတာမဟုတ်လား ဒီလူကြီး အချစ်တော်ရင်တော်မှာလေ။နောက်ပြီးတနေကုန်အားနေတာဘဲ။
“ကောင်းပြီလေ သိပ်တော့ကြာလို.မရဘူး နော်”
ကျမသူ.ရဲ.ဘားတန်းပေါ်တက်ထိုင်လိုက်တယ် ဖင်တော့ကြိမ်းသား သူ.ရဲ.လက်ကြီးတွေကလဲ ကျမကိုလိုတာထက်ပိုပြီးသိုင်းထားပါတယ်
ကျမရဲ.နို.တွေကိုအခွင့်ရရင်ရသလိုပွတ်တိုက်နေပါတယ်ဒီလိုနဲ.ကုန်ဈေးတန်းထဲဝင်လာပြီး တရွေ.ရွေ.နဲ. လေအေးသာဆိုင်းဘုတ်တပ်ထားတဲ့တည်းခိုခန်းရှေ.မှာရက်လိုက်ပြီ ။
“ဟ အာစီ အချိန်မဟုတ်အခါမဟုတ်”
မန်နေဂျာပေးတဲ့သော့ကိုယူပြီးအပေါ်တက်ခဲ့ပါတယ် ကျမဘယ်လောက်သတ္တိရှိတယ်ပြောပြောပြုံးစိစိအကောင်တွေ ကောင်မတွေဝိုင်းကြည့်တော့ရှက်မိပါတယ်
ဒါနဲ.ရှေ.ကသွားတဲ့ ထိပ်ပြောင်နောက် လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ထိပ်ပြောင်မူလနာမည်ကဘာလဲတော့မသိဘူးမကြာခင်ကဘဲတခန်းတနားနဲ.ဧည့်ခံပွဲလုပ်ပြီးရဲရင့်ဝင်းဆိုပြီးပြောင်းခဲ့ပါတယ်။အခန်းထဲရောက်တော့အဆီပြန်နေတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ.ထိပ်ပြောင်က စားစရာမလာခင်ရေချိုးချင်ကြောင်းပြောပြီ ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားပါတယ်
အိပ်ခန်းကတော့တစ်ယောက်အိပ်ပါ ဒီအခြေနေကြည့်ပြီးကျမသဘောပေါက်မိပါတယ် ထိပ်ပြောင်ဘာကြံစည်နေတယ်ဆိုတာ။ခဏမှာစားစရာတွေရောက်လာပါတယ် ဘရန်နီလဲပါတယ် ထိပ်ပြောင်အကြိုက်သိနေတယ်ထင်တယ်။ရေချိုးခန်းမှထွက်လာတော့၊
“မေသူလေး ရေချိုးလိုက်ပါလား ကိုယ်ကဒီလိုမျိုးအေးအေးဆေးဆေးနေချင်လို.သိသန်.ခန်းဝင်လာရတာ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာဆိုလူကများအိုက်ကအိုက်နဲ.”
ကျမလဲပူအိုက်နေတာနဲ.ရေချိုးခန်းထဲ ထွက်ခဲ့ပါတယ် ရေချိုးခန်းထဲရောက်တော့အသာတံခါးပိတ်ပြီ တုံးလုံးဘဲရေချိုးလိုက်ပါတယ်။ကျမရဲ.တကိုယ်လုံ အတွင်းအပြင်ချောင်ကြိုချောင်ကြား မကျန်ဆပ်ပြာနဲ.တိုက်ပြီးရေကိုနာရီဝက်နီးပါးလောက်ချိုးလိုက်တော့တကိုယ်လုံးလန်းဆန်းသွားပါတယ်။ ပြီးတော့သုပ်သင်ပြီးအဝတ်စားဝတ်လိုက်တယ် အခန်းထဲပြန်ရောက်တော့ ထိပ်ပြောင်ဘရန်နီသောက်နေပါတယ် ကျမအအေးထဲလဲရောထားပုံရတယ် အရောင်ကမကြည်မလင်ဖြစ်နေတယ်
“မေသူ ကိုစကားတစ်ခွန်းပြောချင်တယ် ကိုပြောတာကိုမငြင်းဖို.ကြိုပြောချင်တယ်”
“ပူမနေပါနဲ.မေသူရယ် မင်းရဲ.ကျုရှင်ဆရာက ကို.ရဲ.ကျောင်;နေဖက်သူငယ်ချင်းကွ”
“မင်းကြောင်းတွေ အကုန်လုံး သိပြီးသားပါ”
ကျမရဲ.အောက်မဟာပထဝီ မြေကြီးဟာငလျှင်တောင်လှုပ်သွားပါတယ်။ဟုတ်တယ်လေသူတိုးအသွေးအသားစုတ်မျိုလို.အားရတဲ့ကျမကို တနာရူးထိပ်ပြောင်ဆီလက်လွှဲဘကတယ် သဘောကတော့သူတို. အသုံးမဝင်တေ.့ဘူးပေါ့ ။
“ဒီဟာ ကလေးကစားစရာမဟုတ်ဘူး သတင်းအတိကျရထားတာ”
“ကဲ ရှင်ကဘယ်လောက်များပေးနိုင်လို.စော်စော် ကားကားပြောနေရတာလဲ
“တလကို ၁၅၀၀၀ ပေးမယ် ဒီလောက်ဆိုမင်းတွက်မနည်းပါဘူး ဟိုနှစ်ပေါင်းတောင်ဒီလောက်မရှိဘူး”
“ရှင်ကျမကို ၂၅၀၀၀ မပေးရင်အခုပြန်မယ် ရှင့်ဟာရှင် ကျမနာမည်လူတကာလိုက်ပြောချင်ပြော”
“အောင်မယ် မင်းကငါ့ကိုဒီလိုစမ်းတာလား ကဲကဲ ငါကဘဲရှော့ပါတယ်”
သူဟာပြီးတော့ဘာမပြောညာမပြောနဲ. ကျမကိုကုတင်ဆီစွဲခေါ်ပါတယ် ။
“မေသူလေး အင်္ကျီးချွတ်ထားလိုက်ပါလားဒီလောက် ပူတာ “
ကျမဟာ ဟတ်ခနဲ တချက်ရယ် ပြီး ကိုယ့်ဟာကို ကြယ်သီးတွေဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ် ပြီးတော့တချက်ထဲဗယာစီပါချွတ်လိုက်တော့ ငနဲကြီးဟာအသက်တောင်ရဲရဲမရှုရဲဘဲ ကျမနိုတွေ.ကို ပြူးပြဲကြည့်နေပါတယ် တုန်ရီတဲ့လက်တွေနဲ.နိုတွေကိုမရဲတရဲလာကိုင်တော့ ကျမကဘဲ သူ.လက်တွေကိုအုပ်ပြီး နို.နဲ.ဖိကပ်ပေးလိုက်တယ် ငနဲအတော်သဘောကျသွားပုံရတယ် ကျမကိုကုတင်ပေါ်တွန်းလှဲပြီး နူတ်ခမ်းတွေကို မွတ်သိပ်စွာစုတ်နေလေရဲ.သူ.ရဲ.ကွမ်းစားလို.ထူကြမ်းနေတဲ့ရှာကြီးက ကျမပါးစပ်ထဲဝင်လာပြီး အေးတိအေးစက် ဖြစ်နေတဲ့ ကျမရဲ.ရမက်မီးပုံကို မီးတောက်အောင်ဖန်တီးနေပါတယ်။။
ကျမကိုဘ်ာလိုသဘောထားတယ်တော့မသိဘူး နို.တွေကိုအသာဘဲစုတ်နယ်ပွတ်သတ်နေပါတယ်…ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ကျမရဲ.လက်တွေကလဲ သူ.ကိုသိုင်းဖတ်ပြီး ကျောပြင်ကိုအသာပွတ်ပေးနေမိတယ်….ပေါင်တွေနဲ.လဲ ပွတ်တိုက်မြူးဆွနေမိတယ် သူလက်ဟာကျမထမီကို ချွတ်ဖြေနေပါတယ် ပြီးတော့ခြေမနဲ.ဆွဲညှပ်ပြီး ချွတ်ချလိုက်ပါတော့တယ် အရင်ကရှက်စိတ်မဝင်ပေမယ့် အလိုးခံရတော့မှာမို. စိတ်ကတော့လုပ်ရှားလာပါတယ် စပ်စမိုင်ဒါကို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ဘဲ လိပ်ချွတ်ပေးလိုက်တယ် အချိန်မရှိဘူးမဟုတ်လား။။။
အဆီတွေဝနေတဲ့စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို အသာစုတ်ကိုင်ပြီး ပွတ်သပ်ပေးနေပါတယ် ဒီချိန်မှာဘဲကျမနို.သီးကို မနာအောင်သွားနဲ.ကိုက်ဆွဲလိုက်ပါတယ်..ရင်ထဲမှာသိမ့်ကနဲမတော်ကိုက်လိုက်ရင်ပြသနာ….။ကျမလက်ကလဲ သူ.လီးကို လှမ်းကိုင်လိုက်တော့ သဘောကျသွားပြိးထောင်မတ်လာပါတယ် ကျမခေါင်းမူးနေတဲ့ကြားကဘဲ သူကိုဘေးတွန်းချပြီး သူ.လီးကိုသေချာကြည့်လိုက်တော့ အမယ်လေးကြောက်စရာကြီးပါဘဲရှင် လီးဟာလုံးပတ် ၄လက်မလောက်ရှိတယ် အရှည်က ၆လက်မကျော် စံချိန်မှီပါဘဲ နောက်ပြီးဒစ်တစ်ဝိုက်ပတ်လည်မှာလဲ ကြာဆူးလိုအဆူးလေးတွေတွေ.ရတယ် …သဘာဝရဲ.လက်ဆောင်ဘဲထင်ပါရဲ. သူ.မယားလုပ်တဲ့သူတော့အတော်ခံရမှာဘဲ့….
လီဒစ်ကိုပါးစပ်ထဲအသာငုံလိုက်ပါတယ် ဆပ်ပြာနံ.ဟာလမွှေးတွေကြားမှာစွဲနေသေးရဲ. ဒစ်ကိုအသာဝိုက်ပြီးစုတ်ပေးတော့ငနဲသား ဖင်ကော့လာပြီးမရိုးမရွနဲ. ဖြစ်နေရှာပါတယ် လီးဒစ်ဟာသရေတွေနဲ.ရွှဲးပြီး စုပ်ရတာအရသာရှိလှပါတယ် လီးထိပ်ကိုရှာဖျားလေးနဲ.ပွတ်သပ်ပေးသလို လချောင်းကိုလဲဂွင်းတိုက်ပေးနေပါတယ် ။….ငနဲသားဟာစုတ်တသတ်သတ်နဲ. ကျမခေါင်းကိုကိုင်ပြီး ရှေ.ထိုးနောက်ငင်နဲ. ပါးစပ်ကိုလိုးနေပါတယ် ကျမကလဲလုံးဝမခိုကပ်ဘဲ တာဝနကျေအောင်ပညာကုန်သုံးပြီး လီးကိုစုတ်ပေးနေပါတယ်..၂၅၀၀၀ ရဲ.အင်အားတွေပေါ့…
———-ခဏနေတော့ငနဲ.ဟာထောင့်ကနဲဖြစ်လာတာနဲ.လီးကိုကျမပါးစပ်ကချွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်……ဂွင်းကိုသာအဆက်မပြတ်တိုက်ချပေးလိုက်တယ်….အားကနဲအသံနဲ.အတူလရေတွေဟာလေထဲ ၆လက်မလောက် ပန်းထွက်လာပါတယ် ၀ါထိန်နေတာဘဲအတော်အားကောင်းပုံရတယ် သူနဲ.ဖုတ်ပြီးရင်ဆေးထိုးမှတော်ကြာဗိုက်ကြီးနေရင်ဒုက္ခ….။
ကျမလဲ မောသွားတာနဲ.သူ.ဘေးမှာဝင်လှဲလိုက်တယ် သူကတော့အသေတစ်ကောင်လိုမှိန်းနေလေရဲ.။
စောက်ဖုတ်ထဲ ပူပူနွေးနွးအရာတစ်ခုဝင်လာလို.မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျမပေါင်ကြားထဲသူရဲ.ထိပ်ပြောင်ကြီးကိုတွေ.ရပါတယ် လျှာဟာလှံဖျားတစ်ခုလို
သူဟာအားရပါးရ အရည်တွေကိုမျိုချပြီး စောက်ဖုတ်ထဲခေါင်းမခွာဘဲ
ဆက်ယက်နေပြန်တယ်။ထွက်သမျှ အရည်တစက်မကျန် စိတ်ကြိုက်ရပ်ပြီးတာနဲ. အစေ့ကိုနုတ်ခမ်းနဲ.တေ့စုတ်နေတော့ နာလာတဲ့ထိကိုဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ခေါင်းအုံးနှစ်လုံးခုထားလို. ကျမရဲ.စောက်ဖုတ်ဟာလိပ်တစ်ကောင်ရဲ.ကျောကုန်းလိုခုန်းခုန်းလေဖြစ်နေပါတယ်…အမွှေးလေးများကလဲကြိုးတို.ကျဲတဲ တံဆာဆင်ထားပါတယ်။
ခဏနေတော့ သူ.ရဲ.လီကြီးဟာ ကျမရဲ. စောက်ခေါင်းဖျားတေ့ပြီးမထဲ့သေးဘဲမွှေနောက်လုပ်ရှားပေးနေပါတယ်လီးထဲ အဆူးတွေကစောက်စေ့ကိုလာလလိတော့
ငရဲပြည်ရောက်သွားသလို.ဘဲ ပြောမပြတက်တဲ့ခံစားမကှို အသဲတုန်အူတုန်ခံစားနေရပါတယ် ။ဒါကြောင့်သဌေးမဖတ်တီးက သူ.ကိုတမ်းတမ်းစွဲဖြစ်နေတာပေါ့။….
သူ.လီးကြီးဟာ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲမှ ခေါင်းထဲ့ပြီးမဆံမပြဲထိုးမွှေရှောက်လုပ်ရင်က သူ.လက်တွေကနို.တွေကိုလှမ်းကိုင်ပြီးဆုတ်ချေပေးနေပါတယ်…ကျမရဲ.စိတ်တွေက်ုမထိန်းနိုင်ဘဲကိုယ်ထဲမှာရှိသမျှအရည်တွေကို ဝေါဝေါနဲ.သွန်ထုတ်လိုက်မိပါတယ်။လီးဟာအဝကိုတင်းတင်းကြီးဆို.ထားလို.အရည်တွေဟာအထဲမှာဘဲပြည့်ကျပ်နေပါတယ်။ကျမရဲ.ခါးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ.ညစ်ကိုင်လိုက်ပြီးဒစ်မြုတ်နေတဲ့လီးကို
အထဲစောင့်သွင်းချလိုက်ပါတယ် ပစ်စတင်တစ်ခုလိုဝင်လာတဲ့လီးကြောင့်ပြည့်ရှနေတဲ့ကျမရဲ.အရည်တွေဟာ ရေပန်းလိုလီးပတ်လည်ကနေသူ.ဆီပန်းထွက်ကုန်ပါတယ် ကျမလဲတရှိန်ထိုးဝင်လာတဲ့လီးကြောင့်မသက်သာလှပါဘူး။…
သူဟာကျမရဲ.ကြေးကိုတန်အောင်လားတော့မသိဘူး ကျမရြ.အော်သံက်ုမညှာဘဲ အားရပါးရဆက်စောင့်နေပါတယ်။…….
ကောင်းလှပါတယ်……ရှင်လီးကြီးသလောက် ဆောင့်အားကောင်းသလောက် လီးဘေးကကြာဆူးလေးတွေကြောင့် ကျမရဲ.စိတ်တွေဟာ ဆောက်တည်ရာမရအောင်
ခံချင်နေတာပါဘဲ…အားရပါးရဖြဲ ပေးနေမိတယ်။ခါးကိုကိုင်ထားတဲ့သူ.လက်တွေကိုလဲဆုပ်ကိုင်အားယူထားမိတယ် သားအိမ်ထဲကိုဒုတ်ကနဲဒုတ်ကနဲလာစောင့်တော့
ကောင်းလွန်းလို. တအင်းအင်းနဲ.စည်းချက်လိုက်ပေးနေမိတယ် ။သူရဲ. ဥဟာဆိုရင်လဲ ကျမပေါင်ကြားကိုနာရီ ချိန်သီးလို လာလာရိုက်နေလေရဲ.။…
သူ.ရဲ.သံဒုတ်လိုမာနေတဲ့လီးဟာ ကျမရဲ.စောက်ဖုတ်လေးကို မညှာဘဲစောင့်ပေါတယ် သူနဲ.သာကြာကြာနေရင် အသက်တိုရလိမ်.မယ်။
စောက်ခေါင်းနံရံ တစ်ရှောက်ကိုအဆူးတွေက ထိုးချစ်သွားလို. ရင်ထဲအသဲထဲကလှိုက်လှိုက်ပြီး ယားနေမိတယ် ယားလေအရည်တွေကတစိမ့်စိမ့်ကျလေအရည်ကျလေခံလို.ကောင်းလေ ဖြစ်နေတယ် ကျမခံစားရတဲ့အရသာတွေထဲမှာလောလောဆယ်ဒီအရသာအကောင်းဆုံးဘဲ……
မကြာပါဘူး ကျမလဲ ဆားပက်ခံရတဲ့ တီကောင်လို ဖျက်ဖျက်ခါလူးရင်းအရည်တွေစောက်ရမ်းထွက်ကုန်ပါတယ် သူလဲနောက်၁၀ ချက်လောက်စောင့်ပြီးတာနဲ.
အတင်းကော့ပြီးသားအိမ်ပေါက်မတက် လီးကိုစောင့်သွင်းပြီးအရည်တွေပန်းချလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ. ကျမတို.ရမ္မက်နွံထဲမြုပ်နေလိုက်ကြတာကျမဒုက္ခမရောက်ခင်အထိပါဘဲ။သူဟာကျမကိုယဉ်ယဉ်ကျေးတော့ဆက်ဆံပါတယ်ဒါပေမယ့် လေးလေးစားစားရှိပုံတော့မရဘူး။
သဘောကတော့ဖာသည်လိုဘဲ သတ်မှတ်ထားပုံရတယ် ပိုက်ဆံပေးရင်ရတယ်ဆိုပြီးမညှာမတာတွယ်ပါတယ် ကျမလဲစိတ်နာလာပေမယ့် မပြောသာလို.မပြောခဲ့ဘူး
သူဟာပိုက်ဆံတော့မှန်မှန်ပေးပါတယ် ဒါပေမယ့်ကျမကိုခေါ်ရင်စာတစ်တန်ပေတစ်တန်နဲ. ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်ရေးပြီးခေါ်ပါတယ်ကျမလဲအမှတ်တရအနေနဲ.အဲဒီစာတွေကိုသိမ်းထားမိပါတယ်…..
တစ်နေ.တော့ကျမကျောင်းကပွဲ ကိုရွှေလက်ပတ်ဝတ်သွားမိတယ်ကျောင်းမှာပျော်ကြ ရွှင်ကြနဲ. အိမ်ရောက်တော့ လက်ပတ်ကမပါတော့ဘူးဘယ်သူမှလဲမပြောရဲဘူး လက်ပတ်ကကာလပေါက်ဈေးနဲ. ၁သိန်းခွဲလောက်တန်တယ်ကျမတို.အိမ်ကစီးပွားရေးအချေုင်လည်ကြီးမဟုတ်ပေမယ့်
ကျမအပျိုသွေးသောက်ခဲ့တဲ့ ဆရာဆီသွားတော့ ဆရာကဒီလောက်ချမ်းသာရင် မင်းကိုလက်ထက်ယူမှာပေါ့တဲ့ အလကားအရူးတဲ့ မြင့်မောင်ဆီသွားတော့
ရူးနေလားဘဲပြောတယ် နောက်ဆုံးတော့ကျမရဲ.အလုပ်ရှင် ရဲရင့်ဝင်းခေါ် ထိပ်ပြောင်ဆီသွားတော့ ကျမဒီလောက်လောဘကြီးမှန်မသိလို.သူလိုးတဲ့အကြောင်း
သူလိုချင်ရင်ကျမထက်သာတဲ့ကောင်မတွေလက်ဖြေင့်တီးခေါ်နိုင်ကြောင်းတွေပြောပါတယ် ကျမလဲငိုရင်းအိမ်ပြန်ခဲ့ရတယ်အိမ်ရောက်တော့ ထိပ်ပြောင်ခေါ်တဲ့ စာတွေတွေ.တော့အကြံတစ်ခုရတယ်စာတွေယူပြီးထိပ်ပြောင်ဆီပြန်လာခဲ့တယ် ။
“ဒီမှာရှင်ကျမကို ငွေ၁ သိန်းခွဲပေးမလား ဒီစာတွေရှင့်မိန်းမဆီ ပို.လိုက်ရမလား”
မိန်မလုပ်စာနဲ. ကြီးပွားနေတဲ့ထိပ်ပြောင်ဟာ လူသေလိုသွေးစုတ်သွားပါတယ်
“ဟင် မင်းငယ်ငယ်လေးနဲ. ငွေညစ်တယ်ပေါ့ ငါရဲတိုင်လိုက်မှာ”
“ကဲရှင်ရဲကိုဖုန်းဆက်လိုက်တော့ရဲမလာခင် ကျမရှင့်မိန်မဆီ စာသွားပေးလိုက်မယ်”
“ဟေ့ဟေ့…နေအုံး ဟာ….ငါဒီဖာသည်မနဲ.တွေ.တာ ကံဆိုးတာဘဲ ငါပေးမယ် ပေးမယ် စာတွေပြန်ပေး”
အဆင်ပြေသွားပါတယ် ကျမလဲ ငွေရတာနဲ.ပန်းတိမ်သွားပြီ ပုံစံတူတစ်ခုလုပ်လိုက်ရပါတယ် ကျမတာဝန်ကမပြီးသေးဘူးစာထုပ်ကိုယူ ထိပ်ပြောင်မိန်မကိုသွားပေးလိုက်ပါတယ်။မျက်ရည်တွေကျပြီးမဒိန်းကျင့်ကြောင်းရှောက်ပြောလိုက်တယ် ကျမတိုင်ရင်အရှက်ကွဲမယ့်အကြောင်းကျမကိုခြေတော်တသ်တဲ့ အကြောင်း
အပျိုစင်ဘဝညစ်နွမ်းရကြောင်း အမှန်ပြောဖို.လာခဲ့ကြောင်းပြောပြီး စာထုပ်ကိုပေးခဲ့လိုက်တယ်။
မကြာပါဘူးနောက်နေ. ထိပ်ပြောင် နဲ.အဖွားကြီး ကွာရှင်းကြောင်းသတင်းစာမှာပါလာတယ် သနားညှာတာမှုကင်းတဲ့ ထိပ်ပြောင်လဲ နဂိုမူလဘဝကားဘော်ဒီရုံမှာဘဲ
ပြန်ပြီးဘော်ဒီထုနေရပါတော့တယ်…..ကျမလဲဒီ အတွေ.ကြုံတွေကြောင့်ယောင်္ကျားတွေကို စိတ်နာပြီးသူတို.ကိုနဖားကြိုးတက်ဖို.ဘနာဖားကြိုးတက်ဖို.သာကြိုးစားနေရတယ်….
တစ်နေ. ကျမတိုအိမ်ကို ဖေဖေ သူငယ်ချင်းဆိုသူနဲ.သူ.မိသားစုရောက်လာပါတယ် အိမ်မှာတလလောက်တည်းမှာမို.စိတ်ညစ်သွားမိတယ်
ဒါပေမယ့်လာမှတော့ဧည့်ခံရမှာပေါ့ အဲဒီလူကြီးနာမည်က ဦးမြင့်စိုးတဲ့ ဌာနတစ်ခုကအရာရှိကြီးဘဲ သူသမီးနဲ.မိန်းမလဲပါတယ် မိန်းမကကြူကြူတဲ့
သမီးကတော့အသက် ၁၅နှစ်အရွယ်ဘဲရှိသေးတယ် နာမည်က ရိုစီ တဲ့လေ။
ကျမအားတဲ့ချိန်ဆို လည်စရာပတ်စရာရှောက်ပို.ရတယ် သူ.သမီးလေးက ကျမကိုအတော်ခင်ပါတယ် သူ.မိန်းမကတော့မာနခပ်ကြီးကြီး ကျမတို.နဲ.မရောဘူး
ဒါပေမယ့်ငနဲကြီးက အခွင့်ရေးရတိုင်း အချိုးစားလှပတဲ့ကျမဘော်ဒီကို တစိုက်စိုက်ငေးကြည့်နေတက်တယ် ကျမလဲစိတ်ထင်တာပါလို.ဘဲ ဖြေသိမ့်လိုက်တယ်။
တစ်နေ.တော့ သူ.ရုံးကိစ္စနဲ. လှည်းကူးသွားဖို.ကျမကိုအဖော်ခေါ်ပါတယ် သူ.သမီးလဲပါတာပေါ့ အိမ်ကထွက်ပြီး ဝင်ဒါမီယာ သူအမျိုးအိမ်မှာ ကောင်မလေးကို
ချထားခဲ့တယ် ခုတော့သူနဲ.ကျမ နှစ်ယောက်ထဲခရီးဆက်ရတော့မယ် ။ကျမစိတ်ထင်နေပေမယ့် ပစ်မှားရာရောက်မှာဆိုးလို.ဆက်မတွေးတော့ဘူး ။
ကားလေးကတရိပ်ရိပ်နဲ. သွားရင်း လှည်းကူးမြို.ထဲဝင်လာပါတယ် ခြံကကျယ်လွန်းတော့ တခြားအိမ်တွေနဲ.သီးခြားဖြစ်နေတာပေါ့။
“ကဲ သမီးဒီမှာခဏစောင့်နေနော်ဦး မြို.ထဲသွားစားစရာဝယ်လိုက်အုံးမယ် ကိုယ့်အိမ်လိုသဘောထား”
“ဟို.ရှိုးကစ်ထဲမှာ ကက်စက်ရှိတယ် အောက်ကအံဆွဲ ထဲမှာ စာအုပ်တွေရှိတယ်”
သူလဲ ထွက်သွားရော ကျမကတ်စက်ဖွင့်ဖို.ခွေ လိုက်ရှာတော့ တစ်ခွေထဲတွေ.တယ် ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ ကတ်စက်မှာဖွင့်စရာတခွေထဲရှိတာ ရယ်စရာတော့ကောင်းသား ဒါပေမယ့် ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုပြီးထဲ့လိုက်တော့ ငြိမ့်ညောင်းလွမ်းမောဖို.ကောင်းတဲ့ တီလုံးတွေထွက်လာတယ်
ကျမလဲ အံဆွဲထဲ ကစာအုပ်တွေယူပြီး ဆက်တီရှိရာပြန်လာခဲ့တယ် ။ပထမတော့ရိုးရိုးစာအုပ်ပါဘဲ နောက်တော့ ကာမစပ်ယှက်နည်း စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
အဟောင်းတွေရော အသစ်တွေရော စုံနေတာဘဲ အဲလိုငေးမောနေတုန်မှာ ကတ်စက်တီးလုံးက ပျောက်ပြီး ရမ္မက်သံလွှမ်းနေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ.အော်ညီးသံ
ထွက်ပေါ်လာပါတယ် ။ကျမတစ်ကိုယ်လုံးကြက်သီးဖျန်းဖျန်းထသွားတယ် အော်တဲ့မိန်းမအရမ်းသရုပ်ပါတော့ ကျမကိုယ်တိုင်ခံစားနေရသလိုပါဘဲ။
ကျမကြည့်တဲ့ပုံတွေကလဲ ကြမ်းသထက်ကြမ်းလာပါတယ် နောက်ဆုံးပေါ်စာအုပ်ဆိုတော့ကြမ်းနိုင်သမျှကြမ်းထားပါတယ် ….ဦးမြင့်စိုး ဟာဒါတွေကိုကြိုတင်စီစဉ် ထားပုံရတယ် ကတ်စက်ထဲက အသံက ကျမ ကိုဓါးနဲ.မွှမ်းနေသလိုပါဘဲ မြင်ရတဲ့ပုံတွေ ကလဲအသဲတစက်စက်တုန်စေပါတယ်
ကျမ ခန္ဒာကိုယ်ထဲ ကအမျိုးအမည်မဖော်နိုင်တဲ့ ယားယံမှုခံစားရပြီး စောင်ခေါင်းထဲကနေ သေးပေါက်သလိုအရည်တွေ တစိမ့်စိမ့် ဆင်းလာပါတော့တယ်။
တစ်နာရီလောက် ကြာတော့ဦးမြင့်စိုးပြန်ရောက်လာပါတယ် စားစရာတွေလဲပါတာပေါ့ ကျမမူဘယ်လောက်ပျက်နေတယ်အသိဘူးလာတာနဲ.စားစရာတွေချပြီး။
“သမီး နေမကောင်းဘူးလား” မေးရင်းနဖူးပေါ် လက်လာတင်ပါတယ် ကျမ ရမ္မက်ပြင်းထန်ချိန်မှာ ယောင်္ကျားတစ်ဦးရဲ.အထိ အတွေ.ကြောင့်
ဆက်ကနဲ တုန်သွားမိတယ် ကျမခေါင်းအသာခါပြမိတယ် ။အဲဒီချိန်မှာသူက ကျမခါးကို ဆက်ကနဲပွေ.ရင်း ကျမနုတ်ခမ်းတွေကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ ရမ္မက်နဲ. အားရပါးရ စုတ်ယူပါတော့တယ် …ကျမကတော့ရုန်းတာပေါ့ …သူရင်ဘတ်ကို သူမျက်နှာကို ဘယ်ညာရမ်းတာပေါ့ …ဒါပေမယ့် ကျမရဲ.တောက်လောင်နေတဲ့ရမ္မက်မီးတွေဟာ ကြာရှည်ငြင်းဆန်ခွင့်မပြုပါဘူး …သူလက်ထဲမှာပျော့ခွေသွားရပါတယ် ….။။။
သူဟာကျမ နုတ်ခမ်းသားတွေကို လျက်နေသလို သူ.လက်တွေကလဲ ကျမ ထဘီ ကို အသာချွတ်ချလိုက်ပါတယ် ။လေပြေနုရဲ.အတွေ.ကို ပေါင်တံ တွေကတစ်ဆင့်ခံစားလိုက်ရပါတယ် ကျမရဲ. ပစ္စည်း မို.မို.လေးကို အသာလက်ဝါးနဲ.အုပ်ပြီး စပ်စမိုင်တာအပေါ်ကနေ ပွတ်ပေးနေရဲ. စပ်စမိုင်ဒါကလဲ ခုနက မြင်ရ ကြားရတာတွေကြောင့်စိုရွှဲ နေပါတယ် ဒါကိုတွေ.ရတော့သူဟာ အားတက်လာပြီး စပ်စမိုင်ဒါကိုချွတ်ချလိုက်ပါတယ် စပ်စမိုင်ဒါကျွတ်သွားတာနဲ. ကျမပစ္စည်းထဲ လက်ခလယ်အသာသွင်းပြီး မွှေနောက် ထိုးဆွပေးနေတယ် ကျမရဲ.ရမ္မက်တွေ အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ. ထကြွနေချိန်မို. လက်ချောင်းဝင်လာတာကိုအရမ်းအရသာတွေ.နေမိတယ် ကျမရင်ထဲမှာ ခံစားမှုနှစ်မျိုး တစ်ပြိုင်ထဲဖြစ်နေတယ် ရမ္မက်မီးတောက်လောင်နေချိန်မှာ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်(ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်)အလို ရှိနေပေမယ့် အဖေ့သူငယ်ချင်း အဖေအရွယ် ဂုဏ်သိက္ခာရှိလူကြီး လူကောင်း ကြောင်သူတော်ဟာ သမီးရွယ် ကျမကို အကွက်ဆင်ပြီးဆွဲ တော့မှာမို. အော့နှလုံးနာမိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျမမငြင်းပါ ဘူး ယောင်္ကျားတွေကိုကစားချင်စိတ်ကြောင့် သူပြုသမျှနုနေမိပါတယ် ….ကျမရဲ.ရင်စေ့ အင်းကျီလေးကို စောင့်ဆွဲလိုက်တာနဲ. နှိပ်ကြယ်သီးတွေဟာ ပြုတ်ထွက်သွားလို. ကျမရဲ. ၀ါဝင်းပြီးအရွယ်နဲ.မလိုက်အောင် ကြီးမားတဲ့နို.အုံကြီးတွေဟာ မနိုင်မနင်း ထိန်းထားရတဲ့ဗရာစီ ယာကို အတင်းရုန်းကန်နေပါတယ် ။ဘရာစီယာ ချိတ်တွေက်ို ကုလားထိုင်ဆက်တီပေါ် ပြန်ချလိုက်ပါတယ် ခုတော့ကျမတစ်ကိုယ်လုံး မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်းပါဘဲ
သူရှေ.မှာကိုယ်ဟန်ပြမယ်တစ်ယောက်လို မျက်စိမှိတ်ပြီး ရပ်နေမိတယ် ။သူဟာကျမကိုခဏထားပြီး သူ.အဝတ်စားတွေကို အမြန်ချွတ်ချလိုက်ပါတယ်
ပြီးတော့ကျမ နို.တွေကို လျှာနဲ.လျက်လိုက် လက်နဲ.ချေ လိုက် ပစ္စည်းထဲနိုက်လိုက် ဖင်ကိုဆွလိုက် လှုပ်ရှားနေပါတော့တယ် ။ဆိုဖာပေါ်ထိုင်ခိုင်ူပြီး ကျမခြေထောက်တွေကို လက်တန်းတွေပေါ်မှာချိတ်တင်လိုက်ပါတယ် ပြီးတာနဲ.ခေါ်င်းမြုတ်ပြီး ကျမပစ္စည်းကို ရှာထိုးပြီးကလိ ပါတော့တယ် ။။။…
အိုး.. အင့်ဟင်း ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ် ….. အမလေး….. အား… အား….. ရှီး……
ကျမရဲ့ ပါးစပ်က ထုံးစံအတိုင်း အာမေဋိတ်တွေ မရှက်မကြောက်ဘဲ ထွက်လာရပါတယ်။
ကောင်းလိုက်တာရှင်… ကျမရဲ့ပစ္စည်းကို လျှာနဲ့ ကလိပေးတိုင်း ကောင်းတာပဲပေါ့………..
မိန်းကလေးတွေ မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ အရသာပါပဲ..
ကျမရဲ့ ပစ္စည်း ခေါင်းထဲက အရည်တွေလဲ ကျလာရော ငနဲ့ကြီးက မတ်တပ်ရပ်ပြီး သူ့****ကြီးကို
ကျမ ပစ္စည်း ခေါင်းမှာ တေ့လိုက်ပါတယ်….. ပြီးတော့ ချောနေတဲ့ လမ်းအတိုင်း အသာထိုးသွင်းလိုက်ပါရှင်……
****ဟာ နဲနဲတော့ ကြပ်ကြပ်လေး ဝင်သွားလို့ နာသွားပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ဆောင့်အားကောင်းလာတော့
ပြွတ်…… ပြွတ်…… ပြွတ်…… ဒုတ်… အင့်…. ဒုတ်…. အမေ့
ပြွတ်…… ပြွတ်…… စွတ်ဒုတ်…. အား… အင်း… ဒုတ်…. အီး ပြွတ်…… ပြွတ်…… ဦး….
ကျမတော့ ကောင်းလွန်းသောကြောင့် သူ့ခါးကို လှမ်းဖက်ပြီး ညောင့်တိုင်း ဆွဲဆွဲဆောင့်နေမိပါသည်။
အားရပါးရပေါ့ … ပစ္စည်းကသားအိမ်ကို မညှာမတာ ဆောင့်နေတော့ သားအိမ်တစ်ခုလုံး နာကျင်လာပါတယ်။
****စေ့ကလေးလဲ ပွတ်တိုက်ဖန်များလို့ နီရဲယောင်ရမ်းလာပါတော့တယ်။
(15) မိနစ်လောက်ကြာတော့ ကျမ ဒုတိယအကြိမ် ပြီးသွားပါတယ်…… ကျမလဲ အရည်တွေထွက်ရော
သူလဲ ဆက်မဆောင့်နိုင်တော့ပဲ ကျမနို့တွေကို အားရပါးရ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပစ္စည်း ထဲ သုတ်တွေ ပန်းချလိုက်ပါတယ်
အိုး… ကောင်းလိုက်တဲ့အရသာ.. ကျမက သူ့ခါးကို ခြေနှစ်ဖက်နဲ့ ချိတ်ပြီး ငါးမိနစ်လောက် ဖက်ထားလိုက်တယ်
”ကဲ…. သမီး ပြန်ကြစို့…. သိပ်ကြာယင်… အိမ်ကစိတ်ပူနေလိမ့်မယ်..”
ကျမ ဘာမှမပြောပါဘူး….. ကျမရဲ့ ရမ္မက် ပြေငြိမ်းတော့မှ ဒီလူကြီးကို
သတ်ပစ်ချင်လောက်အောင် မုန်းနေမိတယ် ဒါနဲ့ ရေချိုးခန်းမှာ
သာမန်ကိုယ်လက်ဆေးကြောပြီး အဝတ်လဲလိုက်ပါတယ်…. သူလဲ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ
”သမီး ဒီနေ့ မုန့်ဖိုး ဘယ်လောက်ရလဲ” ကျမတို့ လမ်းတစ်ဝက် အိမ်အပြန်မှာ သူက စပ်စုလိုက်ပါတယ်
ကျမ မုန်းလက်စရှိတဲ့ ဒီလူကြီးကို မျက်စောင်းထိုးပစ်လိုက်ပါတယ်…. ကျမ သူငယ်ချင်းတချို့
တစ်နေ့ ငါးထောင်ခြောက်ထောင် ရတာသိရင် ဘယ်လိုနေမလဲ။
”ရော့… ဦးသမီးကို မုန့်ဖိုးပေးတာ”
သူပေးတဲ့ပိုက်ဆံကို အသာစောင့်ကြည့်လိုက်တော့ တစ်ထောင်တန်ငါး ရွက်ပါ
အဲဒါကိုပဲ အင်မတန် စွန့်လွှတ်မှုကြီး လုပ်တဲ့ပုံနဲ့ ပေးနေရှာပါတယ်။
”အိုး….. ကျမ မယူပါရစေနဲ့ ကျမ တစိမ်းတွေဆီက ပိုက်ဆံ မယူတတ်လို့ပါ”
ကျမက ကျိတ်မှိတ်ပြီး စကားလှအောင် ပြောလိုက်ပေမယ့်…..
” အိုး…… ဦးက တစိမ်းမှမဟုတ်တာ… ယူပါသမီးရယ်…. လိမ္မာပါတယ်…. ရော့….. ရော့……
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ကျမရဲ့ ရင်နှစ်မွှာကြားထဲကို ထိုးသွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျမစိတ်ထဲမှာ ဒီငနဲကို ဘယ်လိုပညာပေးရမလဲလို့ စဉ်းစားနေမိတယ်….
ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လွှတ်လိုက်တဲ့ ဖေဖေ့ မျက်နှာတောင် မထောက်ဘဲ ကျမကို မုဒိန်းသမားဆံဆံ
လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီအရာရှိမင်းကို ဘယ်လို ပညာပေးရမလဲ။
ကျမ မေ့ကနဲဖြစ်သွားချိန်မှာ ကားရပ်သွားပါတယ်။ ဟွန်းသံ တစ်ချက်ပေးလိုက်တော့ ရိုစီလေး
ပြေးထွက်လာပါတယ်….. ကလေးလဲမဟုတ် လူကြီးလဲမကျသေးပဲ ရိုစီဟာ ကျမဘေးမှာ ဝင်ထိုင်ရင်း
”ဒယ်ဒီကတော့ ဒီလိုပဲ အလုပ်များတယ် များတယ်နဲ့ ရိုစီနားကို ကပ်တယ်ကိုမရှိဘူး”
”နောက်ဆို သမီးလေးက ဒယ်ဒီကို ချစ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူးကွယ်……
အချိန်တန်ယင် ဒယ်ဒီတို့နဲ့ ခွဲသွားမှာပါ…”
”ဟင်…. ဒယ်ဒီ ဒီလိုမပြောပါနဲ့….. သမီးပါလိုက်မယ်…”
သူတို့သားအဖက ကျမကိုတောင် ဂရုမစိုက်တော့ဘဲ အချစ်နလံထနေကြပါတယ်….
ဒါကိုကြည့်ပြီး ဦးမြင့်စိုးတစ်ယောက် သူ့သမီးကိုတော့ အတော်ချစ်သားပဲလို့ မှတ်ချက်ချလိုက်မိတယ်..
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကျမတို့ အိပ်ချင်လိုက်ပေမယ့် ရိုစီကလေးက ကျမကို
အပြင်လိုက်ပို့ဖို့ ပူစာတာနဲ့ လမ်းထိပ်ဖက်ထွက်ရပါသေးတယ်……
ဟိုလျှောက် ဒီလျှောက်နဲ့ ည (၇) နာရီ ထိုးသွားလို့ အိမ်ပြန် ထမင်းစားပြီး
အိပ်ယာ ဝင်ခဲ့ပါတယ် ရိုစီဟာ ကျမကို ခင်နေပြီမို့ ကျမဘေးမှာ အတင်လာအိပ်ပါတယ်..
ကျမတို့ မိန်းကလေးချည်းပဲဆိုတော့ အိုက်ကလဲ အိုက်တာနဲ့ ထဘီရင်လျားတွေနဲ့
အိပ်ယာဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမ အခန်းမီးကို ပိတ်လိုက်တာနဲ့ လပြည့်ညရဲ့ လရောင်ဟာ
ဟိုလူးဒီလှိမ့်နဲ့ ကျမရဲ့ ပေါင်တွေဟာ ရိုစီပေါင်ပေါ်သွားတင်မိတာနဲ့ ရိုစီဟာ ကျမဖက်လှည့်လာပါတယ်
လရောင်အောက်မှာ ရိုစီဟာ နတ်သမီးလေးလို လှနေပါတယ် ကျမလဲ မနေနိုင်တော့ပဲ
သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်း ထူထူလေးတွေကို ယုယုယယ စုပ်လိုက်မိတယ်…..
ရိုစီဟာတစ်ဆက်ဆက်တုန်လာသလို ကျမကိုသွယ်ပြောင်းတဲ့လက်ကလေးတွေနဲ. ပွတ်သတ်လာပါတယ် ။
ကျမရဲ. ရမ္မက်စိတ်လဲ ထလာပြီမို. သူ.ရဲ.ထဘီရင်ရှားကလေးကို အသာဖြေချလိုက်ပါတယ် …ရှောက်ချိုသီးခြမ်းကြီးတင်ထားသလို မို.မို.လေးကြွနေတဲ့ ရင်သားအစုံဟာ ကျမရဲ.ရင်ကို ပူလောင်စေပါတယ် အသာလေးလက်ဝါးတင်ပြီး တစ်ဖြစ်ဖြစ် ညစ်ပေးလိုက်မိတယ် ။….
ကျမရဲ.လျှာ ဟာသူရဲ.လျှာနုနုလေးကို စုတ်လိုက် အာခေါင်တစ်ရှောက် လျောတိုက်လိုက်နဲ. ရိုစီအသက်ရှုနုန်းကို ပြင်းထန်စေပါတယ် ကျမကိုလဲ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးဖက်ထားတယ် ကောင်မလေးကအသက်၁၅ နှစ်ကျော်ဘဲရှိသေးတော့ ဒီစိတ်တွေလုံးဝမရှိသေးပါဘူး …ဒါပေမယ့်မိန်းမတို.ရဲ.
မူလဗီဇ စိတ်ဟာ အခုတော့နိုးကြားစပြုနေပြီမို. သူ.တစ်ကိုယ်လုံးလှုပ်ရှားနေပါတယ် ကျမရဲ. လက်တွေဟာ သူ.နို.သီးတွေထဲက သာကူစေ့လို
အစေ.လေးတွေကို တထုတ်ထုတ်မြည်အောင်ခြေ ပေးနေပါတယ်။….
“အမမ …မမ ..နာတယ်…ဖြည်းဖြည်းလုပ်”
သူ.နုတ်ခမ်းကနေခွာထားတဲ့ ကျမဟာသူ.နို.တွေကို အသာငုံ.စို.ပေးလိုက်ပါတယ်။လက်တဖက်ကလဲ ထမီကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းခွာချရင်း
ဆီးခုံလေးကို ပွတ်သတ်ပေးနေမိတယ် ဆီးခုံလေးမှာ လရောင်အောက်မှာအမွှေးမရှိဘဲ ပြောင်ချောချောလေးပေါ်လာပါတယ်။….
“ရိုစီ တစ်ခါတစ်လေ စောင်ခေါင်းထဲမှာမရားဘူးလား”
“တစ်ခါတစ်လေမှပါ မမကလဲ ဘာတွေရှောက်မေးနေတာလဲ”
“မိန်းမတိုင်း အင်ဂျက်ရှင်း မထိုးခံရင် လူလို.မခေါ်ထိုက်ဘူး”
“အင်း..အခုအမ အင်ဂျက်ရှင်းထိုးတဲ့ပုံစံ လုပ်ပြမယ်”
ကျမဟာ ကောင်မလေးကို စကားနဲ.အာရုံလွဲရင်း စောက်ဖုတ်လေးကို အသာပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်……..
အင်မတန်နုညံတဲ့အမွှေးတွေကြောင့် ကတ္တီဘာကို ပွတ်ရသလိုပါဘဲ။…..သူ.နို.တွေဟာအထိုက်ရှောက်မာတောင်လာပါတယ်..ကျမနုတ်ခမ်းကိုခွာလိုက်ပါတယ်
နဂိုထက်ပိုပြီး ဖေါင်ကားလာတဲ့ နို.တွေကိုကြည့်ရင်းရိုစီ ဟာတအံတသြငုံ.ကြည့်နေပါတယ်။။။။….
“ကဲ ရိုစီ ပေါင်ကားထားပေး….မမအင်းဂျက်ရှင်းထိုးတဲ့ ပုံစံပြမယ်”
အသာဖြဲချလိုက်တဲ့ ရိုစိ ပေါင်ခွကြားဟာ ကျမတို.ရဲ.နုပ်ခမ်းနှစ်လွှာ ခပ်ဟဟ ထားသလောက်ဘဲရှိပါတယ်။။….လရောင်အောက်မှာ ပန်းနုရောင်နုတ်ခမ်းသားတွေက
…မရမ်းစေ.ရောင် အစေ.လေးကို ၀ိုင်းပတ်ထားပါတယ်…အစေ့လေးဟာ အတော်ကြီးပါတယ် လက်သန်းနှစ်ဆစ် နီးပါးပါဘဲ ကျမ စောက်ဖုတ်ထဲ နှခေါင်းငုံ.လိုက်တော့….။
“ညီမ စောင်ခေါင်းထဲ အင်ဂျက်ရှင်း ဝင်လွယ်အောင်လုပ် မလို.”
ဒီတော့မှငြိမ်သွားတဲ့ ကောင်မလေးစောက်ခေါင်းထဲ ကျမရဲ.ရှာကို ထိုးထဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ……..
“အိုး….မမ….မ…အမလေး…ရိုစီမနေတက်တော့ဘူး …အား…အား…အား…မမ ..အ…အမလေး..ရိုစီသေတော့မယ်…”
ကျမရဲ.ရှာဟာ ရိုစီ ပစ္စည်းထဲမှာမွှေချင်တိုင်း မွှေနေမိတယ် ….အဓိက အားဖြင့်တော့ အစေ.လေးကို မညှာမတာ ရက်လိုက် စုတ်လိုက်နဲ. လုပ်ပေးပါတယ်…..။
ရိုစီဟာ ကုတင်ပေါ်မှာဆောက်တည် ရာမရဘဲ တွန်.လိမ်ကောင်ကွေးနေပါတယ် ဖင်လေးဟာကော့တက်လာသလို ပေါင်တွေလဲ ကားလိုက်စေ.လိုက်နဲ.
သူကိုယ်တိုင် မသိဘဲနဲ.ရမ္မက်တွေ ထလာပါပြီ….စောက်စေ့ကလေးဟာတဖြည်းဖြည်း မာလာပြီး လျှာနဲ.ပွတ်လိုက်တိုင်း ရော်ဘာချောင်းလေး လိုဘယ်ညာယိမ်းနေပါတယ် ။…..
ရိုစီ စောက်ခေါင်းထဲက ကျမမြင်ဖူးသမျှထဲ မှအရည်တွေထဲမှာအပြစ်ဆုံးအရည်တွေ တလိမ့်လိမ့်နဲ. စီးကျလာပါတယ်….ကျမခေါင်းကို သူ.စောက်ဖုတ်ထဲ ဖိတွန်း
ထားပြီး ငြိမ်ကျသွားပါတော့တယ် သူ.ရဲ.အရည်တွေကတော့ ကျမဝမ်းထဲရောက် ကုန်တာပါဘဲရှင်။……
ရိုစီ ကိုထိုးဖို.ပစ္စည်းကောင်းကောင်းလိုက်ရှာတော့ အခန်းထဲမှာ ဘာမှမတွေ.ပါဘူး ။..အခန်းပြင်ထွက်ရှာတော့နောက်ဆုံး နောက်ဖေးစကောထဲမှာထဲ့ထားတဲ့
ရုံးပတေသီးတွေတွေ.လိုက်ရပါတယ် …..ကြံရာမရတာနဲ. အဲဒီထဲက အကြီးဆုံးရွေးယူပြီး သေချာရေဆေးလိုက်ပါတယ် ..အသီးကအတော်ရင့်နေပြီမို. အစိမ်းရင့်ရောင်သန်းနေပါတယ်….အသီးတစ်ခုလုံးနေရာလွတ်မရှိအောင် အမွှေးနုတွေနဲ.ပြည့်နေပါတယ်…….။
ရုံးပတေသီး ကိုကြည့်ပြီး ကျမအတော်ကျေနပ်သွားတယ် ခရမ်းသီးသာသုံးကြတာ ရုံးပတေသီးသုံးတဲ့ ကျမဟာ လိင်ပညာကို တစ်ခတ်သစ်စေသူမဟုတ်ပါလား။
“ညီမလေး…ဒီမှာကြည့် အင်ဂျက်ရှင်ဆိုတာ ဒီလိုပုံစံဘဲ…”
“အေး ဒါနဲ.ပထမ စမ်းမယ်…နောက်သဘောကျရင် အင်ဂျက်ရှင်းအစစ်နဲ.လုပ်မယ်”
ကျမဟာပြောပြာဆိုဆို သူမရဲ.ဒူနှစ်ဖက်ကိုထောင်ပြီး ဒကောင်ကွေးကနေဆွဲထားခိုင်းလိုက်ပါတယ် ဒီတော့မှအရည်တွေနဲ.တင်းပြောင်နေတဲ့
ပန်းနုရောင်အသားနုလေးတွေဟာ ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်လာပါတယ် ။….
စောင်ခေါင်းတစ်ရှောက် ရုံးပတေသီးနဲ. အလျားလိုက် ပါတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ …..
“အိုး…မမ..မမ….အင်ဂျက်ရှင်းကိုအပေါက်ထဲ ထည့်လိုက်ပါ …ကျမအထဲ မှာယားနေပြီ…”
“အိုး…ညီမလေးကလဲ ခဏစောင့်အုံး ….သေချာအပြင်မှာစမ်းပြီးမှအထဲ ထည့်ရတာ”
ဒါနဲ.ရုံးပတေသီးကို စောင်ခေါင်းကျဉ်းလေးထဲ အသာနှစ်သွင်းလိုက်ပါတယ်။….
ကျမရဲ.လှည့်ပတ်မွှေနောက်ပြီး ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်ပေးမှုကြောင့် ရိုစီ အတွင်းသားတွေဟာ ရုံးပတေးသီးကိုဖမ်းညစ်နေကြပါတယ် ….
ညစ်လေ အသီးအမွှေးတွေက ရိုစီကို ရူးမတက်ရားယံစေပါတယ် ။….
သူမရဲ.ပေါင်ဟာအစွမ်းကုန် ဇြဲထားပြီး အထဲအသီးမရောက်ရောက်အောင် ကော့ကော့ပေးနေပါတယ် အသီးကို အရင်းမြုတ်တဲ့အထိ
စောင့်ချလိုက်တာနဲ. အားကနဲ အော်ရင်း ဖြူပြစ်ပြစ် အရည်တွေကို ပန်းချလိုက်ပါတယ် ။။။။။။။။။
စောက်ခေါင်းထဲမှာ ညှပ်နေတဲ့အသီးကို လဲ ပေါင်နဲ.ညှပ်ပြီး ဘယ်ညာလူးလိမ့်နေပါသေးတယ် ..မတော်အသီးစောက်ခေါင်းထဲကြိုးကျန်ခဲ့ရင်ဒုက္ခ။။။။
ခဏနေတော့ ရိုစီမျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီး ကျမကို ရှက်ပြုံးလေးပြုံးပြပါတယ်။……
“ခဏခဏ ဘဲ..သိပ်ကောင်းတာကိုး…ရိုစီ တစ်ခါခံဘူးရင်နောက်တစ်ခါခံချင်လာတယ်”
“ပထမ မမနို.တွေကို ဆို.ပေးရမယ်..” ပြောပြောဆိုဆို ကျမ ထဘီ ကိုချွတ်လိုက်တော့
“အေး…အဲဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ အင်ဂျက်ရှင်းထိုးရင်လှတယ်လို. ….”
ရိုစီဟာကျမနိုတွေကို မစို.တက်စို.တက်နဲ. စို.ပေးနေပေမယ့် ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်။
ကျမ သူရဲ.နိုဆို. ပုံကိုတော်တော်ကြိုက်သွားပါတယ်….ကလေးတစ်ယောက်ဆို.ပုံမျိုးပေမယ့် ကျမရမ္မက် ကို နိုးဆွနိုင်ပါတယ်…။
“ကဲ…အခုနက ရိုစီပစ္စည်းကိုမမ လုပ်ပေးသလိုလုပ်ပေးအုံး”
“ဟုတ်ပြီ….ပထမ အစေ့လေးကိုတွေ.လား လျှာလေးနဲ.အသာကလိပေး ရိုစီ ရေခဲချောင်းယက်ရင်ယက်သလိုလေး…
“ကောင်းလိုက်တာရိုစီ ရယ် ….အား….ကျွတ်……ကျွတ်….ကျွတ်….အမလေး ကောင်းတယ်ကွယ်…”
“အခေါင်းလထဲ လျှာထည့်အုံး ….အေး…မွှေပေး..ဟုတ်ပီ…အဲဒီနားမှာနာနာမွှေ ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ…..”
ကျမ အရည်တွေဆင်းလာတော့ ရိုစီခေါင်းကို ဖိထားမိတယ် …..မတော်လို.အရည်တွေကို ထွေးထုတ်ရင် အလဟသတ် ဖြစ်သွားမှာဆိုးလို.ပါ…..
နောက်နှစ်မိနစ်လောက်လဲ ရှိရော ….။။။။။။
“မကောင်းဘူး ..ငန်ကျိကျိနဲ. ..”
“ကဲ ကဲ ….ဟိုအင်ဂျက်ရှင်းအတုယူလိုက်အုံး..”
“ဟဲ့….အို…ဖြေးဖြေးထဲ့ရတယ် ဟဲ့….အား…..မွှေပေးဟုတ်ပီ စောက်စေ့ကိုလဲအဲဒါနဲ. စောင်းပြီးပွတ်ပေး…အ..အ..
ကျမကတော့ ကောင်းလွန်းလို. တကိုယ်လုံးရိုက်ထားသလိုဖြစ်ပြီး….ပြီးပြိဆိုတာနဲ.အိပ်ချလိုက်ပါတယ်……..။။။။။။
“သေတာကျနေတာဘဲ မမကိုလဲ လုပ်ပေးပြီးရော မမဘေးမှာဒီတိုင်းဝင်အိပ်လိုက်တာဘဲ..”
ဟုတ်ပါတယ် ကျမတို.နှစ်ယောက်လုံးကိုယ်တုံးလုံးဘဲ အိပ်ခဲ့ကြတယ်…..ရိုစီလေးက ချစ်စရာအလင်းရောင်အောက်မှာလှချင်တိုင်းလှနေပါတယ်……….။။။။
ကျမလဲ သူ.ကိုပြောပြီး အဝတ် ဝတ်ပြီး ရေချိုးခန်းဘက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်……………။။။။။။။
လုပ်စရာရှိတာတွေ မြန်မြန်လုပ်ပြီး မြင့်မောင်ဆီကျမတို.လာမယ့်အကြောင်း နဲ. ကျမရဲ.ကိစ္စကိုပြောလိုက်ပါတယ်….သူကသူ.သူငယ်ချင်းအိမ်ကိုချိန်းတယ်…
နေ.လည်စာစားပြီးတာနဲ. လစ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ် အိမ်ကိုတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ပြောခဲ့တယ်ူမြင့်မောင်ပြောတဲ့ အိမ်ကိုတော်တော်ရှာယူရတယ်…..ရောက်ရောက်ခြင်ဘဲ….
“အထဲဝင်စို. ကိစ္စလေးတွေရှိသေးတယ် ..”
အခန်းထဲရောက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ မြင့်မောင် ဟာအဝတ်အစားတွေချွတ်ပါတယ်
“ရိုစီ …အဝတ်တွေချွတ်လိုက် ..”
“ယောင်္ကျားမှ အင်ဂျက်ရှင်း ထိုးတက်တာဟဲ့..”
ဒါနဲ.သူအဝတ်တွေကို တုန်တုန်ရီရီနဲ.ချွတ်နေပါတယ် စပ်စမိုင်ဒါတော့မချွတ်နိုင်တော့လို.ကျမဘဲ ချွတ်ပေးလိုက်ရတယ်..။
ကျမကိုယ်တိုင်အဝတ်တွေ ချွတ်လိုက်ပါတယ်…မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးအိပ်နေတဲ့ရိုစီ ကို ကျမနဲ မြင့်မောင်လက်တွဲလျောက်သွားပြီး ခိုးကြည့်မိတယ် …..
“အမှန်အကန် ပါကင်ပိတ်လေး တစ်ခုပြောထားမယ် သူ.ကို လေးငါးခေါက်လုပ်ပေးမယ်
သူဟာပြောပြောဆိုဆို သူပစ္စည်းကို မေသူ.နုတ်ခမ်းမှာတေ့လိုက်တော့။…………
“ရိုစီ မင်းပါးစပ်က ကိုယ်ပစ္စည်းကို အုံးမွေးလုံးလို စုတ်သလိုစုတ်စမ်း “
“အေးအေး …အ..အ..အင်း အားမနာနဲ.စုပ်ပေး ..နာနာစုပ် ထိပ်ဖျားကအသားနုကို လျှာနဲ.ပွတ်ဆွဲပေး”
“ဟုတ်ပြီ အင်းးး ကောင်းလိုက်တာ…အင်းအင်း စုပ် လက်တစ်ဖက်က လချောင်းကို ကိုင်လိုက်အုံး”
“အေး…ဟုတ်ပြီ…ရော့ ဒီလိုရှေ.တိုးနောက်ဆုတ်လုပ် ဟား..သိပ်ကောင်းတယ်ကွာ…”
မြင့်မောင် ဟာစုပ်နည်းလက်တွေ.ပြနေလေရဲ.ရိုစီ ကလဲတထွာပြရင် တစ်တောင်မြင်တယ် ….
မြင့်မောင် ရိုစီက်ိုလီးစုပ်ခိုင်းနေချိန်မှာ ကျမလဲ အားနေတာနဲ. ရိုစီပေါင်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးကို ဖြဲချလိုက်တယ် နေ.လည်အလင်းရောင်အောက်မှာရိုစီ ဟာ
နေ.လည်ကထက်ပိုလှနေပါတယ် ကျမလဲကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ. စောက်ဖုတ်လေးကို စေ့စေ့စပ်စပ်ကြည့်လိုက်မိတယ် ။စောက်ဖုတ်အတွင်းသားကမခြောင်တစ်ခြောက်မို. ပလပ်စတစ်နှစ်လွှာလိုစေ့ကပ်နေပါတယ် စောက်စေ့လေးက အကွဲကြောင်းလေးထဲက နေတိုးထွက်နေတယ်
လက်မ နှစ်ချောင်းနဲ.အသာခွဲလိုက်တော့ ဟသွားပြီး နှင်းဆီဖူးလေးလိုဘဲ ကျမလဲ တဖျင်းဖျင်းနဲ.စုပ်ယူနေမိပါတယ် …..
ကျမလျှာဟာ အထဲမှာရှာဖွေရေးခရီးထွက်တော့တာဘဲ စောက်စေ့ကိုဘော်ဒီတိုက်လိုက်တိုင်း ကော့တက်တက်လာပါတယ်…
ပါးစပ်ထဲငုံထားတဲ့ မြင့်မောင် လီကို ပိုပြီးရမ္မက်ပြင်းပြင်းစုပ်ယူနေပါတယ် မြင့်မောင်ကလဲ နုတ်ကအသံမျိုးစုံထွက်လို.နေတယ်……
ကောင်မလေူနို.ကိုလဲ ဆုပ်ချေပေးနေလေရဲ. ကျမယက်နေလို. ၁၅ မိနစ်တောင်မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာ ၃ ခါတောင်ပြီးသွားပြီ…..
သုတ်ရည်တွေကနည်းနည်းတော့ ညှီပါတယ် ဒါပေမယ့်မျိုချလိုက်တယ် ကြိုက်တာကိုး…
မောင်မောင်ကတော့ နိုနှစ်လုံးကိုကိုင်ဆွဲရင်း ကောင်မလေးပါစပ်ကို အတင်းထုတ်လိုင်သွင်းလိုက်တွယ်နေပါတယ် ကောင်မလေးဘယ်လိုနေမယ်မသိဘူးဘေးကကျမ တောင်နာချင်လာတယ်…
ရိုစီ နို.တွေကို ပိပြားသွားအောင်ဖိတွန်းညစ်ပြီး ခါးကကော့တက်လာသလိုပါးစပ်ကလဲဗလုံးဗထွေးနဲ.အော်လိုက်ပါတယ် မောင်မောင်ပြီးသွားပြီပေါ့
သုတ်ရည်တွေ ဘယ်လောက်ထွက်တယ်မသိဘူး ရိုစီ ပါးစပ်ထောင့် တွေကနေစီးကျလာပါတယ်….
လီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့ ပျွတ်ကနဲကျွတ်လာပြီး ရမ်းတမ်းရမ်းတမ်းဖြစ်နေပြီးသုတ်ရည်တွေရော တံတွေးတွေရော ရိုစီ မျက်နှာပေါ်အနှံကျသွားပါတော့တယ် …
ရိုစီ ဟာမောမောနဲ.အိပ်နေတာမို. ကျမကဘဲတက်သလောက် မှတ်သလောက် မြင့်မောင်လီးကို ပြန်ဆွပေးနေရတယ်
ခဏကြာတော့လီးဟာခေါင်းတစန်.စန်.ထောင်လာပါတယ် ရိုစီ ဖင်အောက်မှာခေါင်းအုံးတစ်လုံးခံပြီး မြင့်မောင်ကိုနေရာယူဖို.မျက်ရိပ်ပြလိုက်တယ်…
ကျမ ကိုယ်တိုင်ရိုစီ မျက်နှာတည့်တည့်မှာ မြင့်မောင်ဘက်မျက်နှာလှည့်ထိုင်လိုက်တယ် …မြင့်မောင် ဒစ်တုတတ်တုတ်ကြီးဝင်ရင် ရိုစီ အသေအော်မှဘဲလေ
ကျမ စောက်ဖုတ်နဲ.ပါးစပ်ပိတ်ထားရမယ် လေ
“ကဲ မြင့်မောင် စကြစို.”
မြင့်မောင် ဟာရိုစီ ခြေထောက်တွေကို ခြေချင်းဘက်ကနေကိုင်ပြီး မြောက်ဖြဲလိုက်ပါတယ်….
ရိုစီ အဝ ကျဉ်းတဲ့နေရာမှာခက်နေတာမို. ကျမရိုစီ မျက်နှာပေါ်ကနေ ကုန်းပြီး မြင့်မောင်လီးကို ရိုစီ အဝနဲ.တေ့ပေးလိုက်တယ်….
“အားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး အမေ့ သေပါပြီ အီး ဟီးးးဟီးးးး ဟင့်ဟင့် အ..အ…အ…သေပါပြီ မမရယ်…”
မြင့်မောင်က ဆွတောင်မဆွဘဲ ချွဲကျိနေတဲ့အခေါင်းထဲ ကို လီးကို တရှိန်ထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ် …ခြေက်နေရင်တွန်းကန်လုပ်ရှားနိုင်တယ်အခုချွဲနေတော့ ရုန်ဖို.အချိန်မရတော့ဘဲ လီးဟာဒါရိုက် စောက်ဖုတ်ထဲဝင်ပြီး အပျိုမှေးကို ဖေါက် သားအိမ်းကို သွားထောက်တာပေါ့ …ရိုစီ ခမျာ အသေအော်ရင် ငိုချလိုက်ပါတော့တယ်…..
ကျမလဲ အဲဒီတော့မှသတိဝင် လာပြီး သူ.ပါးစပ်ထဲစောက်ဖုတ်ကိုတေ့ပေးလိုက်တယ်….တစ်ချက်ချက်အရှိုက်မှာ စောက်ဖုတ်ကို
မြင့်မောင်ဟာ ရိုစီ ရဲ.ခြေထောက်တွေကိုသူ.ပေါင်မှာ ချိတ်တင်ပြီး ဖြေးဖြေးချင်းအသွင်းအထုတ်လပ်နေပါတယ်…
လီ သွင်းလိုက်တိုင်းစောက်ဖုတ်လေးဟာ ချိုင့်ဝင်သွားပြီး ပြန်ထုတ်ရင်အုံကြွလာတာမို. အင်မတန်ကြည့်ကောင်းပါတယ်….
ကျမလက်တွေကလဲ ရိုစီ နို.တွေကို လှမ်းကိုင်ပြီးချေမွနေပါတယ် သူ.အဖေလဲ ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာလေ…….
မြင့်မောင် လီးတစ်ခုလုံးဟာရိုစီ စောက်ဖုတ်ထဲကသွေးတွေကြောင့် နီရဲပြောင်လက်နေပါတယ် ….ရိုစီ တင်ပါးတစ်ဝိုက်နဲ. ကုတင်ပေါ်မှာလဲသွေးတွေကမြင်မကောင်းအောင်ပါဘဲ…..
မြင့်မောင်လီး ရိုစီ စောက်ဖုတ်ထဲကို မနားတမ်းဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်တာ ၅မိနစ်လောက်ကြာရော ရိုစီ ဟာအရသာတွေ.လာပုံရတယ် ..
မြင့်မောင်ရဲ.စုပ်နယ်မှုကြောင့် ကျမနို.တွေတင်းမာလာပါတယ် မြင့်မောင်လီးဟာတဖြည်းဖြည်းမီးရထားလိုဘဲမြန်မြန်လာပါတယ် ….
ရိုစီလဲ အငြိမ်မနေပါဘူး ပေါင်ကိုကားလိုက်စိလိုက်နဲ. အစွမ်းကုန်အရသာယူနေပါတယ်…
ရိုစီ ဟာတစ်ကိုယ်လုံး ဓါတ်လိုက်သလို တုန်နေပြီး ပေါင်ကိုအစွမ်းကုန် ဖြဲပြီးတော့ သူမရဲ. အထွဋ် အထိပ် ကိုသွားပါတော့တယ်….
“အား…. အမေ့…. အိုး…. မမ…..မမ…. ရိုစီ ဘယ်လိုဖြစ်မှန်း မသိဘူး…. သေတော့… မယ်…. ထင်တယ်… အိုး….အိုး…အား
ကျမလဲ သူနဲ့ တပြိုင်ထဲဘဲ ပြီးသွားလို့ ဖြူပြစ်ပြစ် အရည်တွေဟာ ရိုစီမျက်နှာပေါ် ခွက်ထဲကနေ လောင်းချသလို တပွက်ပွက် ကျလာပေါ့တယ်။
မောင်မောင်ကတော့ ရိုစီရဲ့ ဒူးတွေကို မြှောက်ဖြဲပြီး လီးကို အားရပါးရ ဆောင့်သွင်းလိုက်ကာ ကုတင်ပါ မကဘူး အိမ်ပါလှုပ်ရှားနေသလား အောက်မေ့ရတယ်။
သူလဲ နောက်ဆုံး အကြောလိုက်ပြီး ကော့တက်လာပါတယ်။ လီးကြီးဟာ ရိုစီ စောက်ဖုတ်ထဲ တင်းကနဲ့ ဖြစ်သွားပြီး သုတ်ပြွန်ကနေ သုတ်တွေဟာ သူ့အပေါ် တင်ကျလာတဲ့ မောင်မောင်ကိုယ်ကို အားရပါးရ ဖက်ထားလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့က ကျမတို့ဟာ ရိုစီကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ၅ ခါလောက် လိုးပါတယ်။ ရိုစီကလဲ ရမ္မက်ထန်သူမို့ လုံးဝမငြင်းပါဘူး စောက်ဖုတ်ကလေးကတော့ နဲနဲ ယောင်ယမ်းနေတာပေါ့။ အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ ၈ နာရီ ထိုးနေပါပြီ။ မေမေတို့လဲ စိတ်ပူနေလို့ ရိုစီအဖေက နွမ်းလျနေတဲ့ သူ့သမီးကို မသင်ကာသလိုကြည့်တယ် ဒါပေမယ့် သိပ် စစ်ဆေးရင်မကောင်းတာမို့ နဲနဲပါးပါးပဲ မေးပြီး ထွက်သွားပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သူတို့ မိသားစု တစ်ပတ်လောက်နေပြီး ပြန်သွားပါတယ်……..
ကျမကလွဲလို့ အားလုံး ဝမ်းနည်းနေကြတယ်၊ သံယောဇဉ်ဖြစ်နေပြီမဟုတ်လား…….
နောက် (၆) ပတ်လောက်ကြာတော့ သတင်းစာထဲမှာ ရိုစီနာရေးပါလာတယ်…..
ကျမ မရှက်တမ်း ဝန်ခံရရင် အတော်ဝမ်းသာသွားမိတယ် အိမ်မှာရှိတဲ့ လူစေ့လျှောက်ပြတော့
မေမေဆို မျက်ရည်တောင် ကျတယ် ဖေဖေက သံကြိုးရိုက်ပြီး သတင်းမေးတော့ ဦးမြင့်စိုးကနေ အသေးစိတ်ရှင်းပြတဲ့ စာတစ်စောင်ရောက်လာတယ်
အကျဉ်းချုပ်ကတော့ ရိုစီကိုယ်ဝန်ရှိလာတဲ့အကြောင်း ဘယ်လိုကိုယ်ဝန်ရလာသလဲ စဉ်းစားမရဘူးတဲ့
မေးတော့လဲ ဘာမှမပြောဘူး ငိုပဲငိုနေတယ်……. သူလဲ စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ ရိုက်လိုက်မိတယ်
နောက်တစ်နေ့မှာ သေနေတာ တွေ့တယ် ဘေးမှာ အိပ်ဆေးပုလင်းရှိနေတယ်
သူရိုက်မိလို့ သူပါသေလိုက်ချင်တယ်တဲ့ ရှင်တို့လဲ ရိပ်မိလောက်ရောပေါ့ ဒီကိုယ်ဝန်ဟာ မြင့်မောင်ရဲ့ ကိုယ်ဝန်ပဲ
အပျိုရိုင်းလေးကို ဘာအကာအကွယ်မှ မလုပ်ပေးပဲ ကျမ ဗိုက်ကြီးအောင် လုပ်ခဲ့တာပါ
ဒီလောက်အထိ မမျှော်မှန်းခဲ့ပေမယ့် ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ ကျမတုန်းကလဲ သူ့အဖေညှာခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ
ကိုယ်တိုင်မှ ကိုယ်ချင်းစာတတ်မှာပေါ့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဒီလောက်ရက်စက်တဲ့ကျမဟာ
သူတို့ပြောသလို မကောင်းဆိုးရွားများ ဖြစ်နေမလား…………………….